Ady amin’ny Pesta : Hihaona amin’ireo masoivoho samihafa ny Praiminisitra -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny Pesta : Hihaona amin’ireo masoivoho samihafa ny Praiminisitra
11/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fampahafantarana ny vaovao. Mitohy hatrany amin’izao fotoana ny ezaka ataon’ny fitondrana amin’ny ady amin’ny Pesta. Voalohan-draharaha teo anivon’ny filankevitry ny governemanta omaly io, ary nanaovan’ny praiminisitra tatitra tamin’ireo minisitra mialohan’ny filankevitra. Tamin’izany no nahalalana fa hisy anio eny amin’ny lapam-panjakana eny Mahazoarivo ny fihaonan’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, sy ireo minisitra voakasiky ny ady amin’ny pesta amin’ireo masoivoho samihafa miasa eto amintsika. Izany fihaonana izany dia entina mba hampitoviana ny fampahalalam-baovao mikasika ny pesta.
Nandritra ny faran’ny herinandro teo, maromaro ireo sehatr’asa notarihin’ny praiminisitra, ary nahitana ny fandraisan’anjaran’ireo minisitra voakasika amin’ny ady amin’ny Pesta, sy ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola, ary nandraisana fanapahan-kevitra maromaro. Ao anatin’izany ny fandrindrana ireo asa samihafa miaraka amin’ny biraom-pirenena misahana ny fitantanana ny loza voajanahary, na ny BNGRC, izay hiaingan’ny asa rehetra. Toa izany koa ny fanamafisana ny fampahalalam-baovao sy ny serasera eto an-toerana, sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ny famoahan’ny BNGRC matetika, ary farany dia ny fandraisana fepetra manokana (fanakatonana ny sekoly, fandrarana ny fivoriam-bahoaka…) izay tsy tokony ahakasika afa-tsy ireo distrika ahitana ny valanaretina.
Tetsy ankilan’izay, nampahafantatra ihany koa ny minisitry ny Raharaham-bahiny fa ankoatra ny Air Seychelles, izay efa mandeha ny fifampiresahana, dia tsy nisy ireo kaompaniam-pitaterana an’habakabaka mieritreritra ny hanafoana ny sidina mankaty amintsika.
Tafiditra amin’ireo asan’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro kosa, amin’ny ady amin’ny pesta ny hetsika fandrarahana fanafody amin’ireo fiara fitateram-bahoaka, taxi-Be, manodidina ny 6000. Etsy ankilan’izay dia nandray an-tanana ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo ny minisitera eo anivon’ny fiadidian’ny filohan’ny repoblika misahana ireo tetikasan’ny filoha.
Betsaka ny toromarika nomen’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mba hiadiana amin’ny fahasahiranan’ny vahoaka, saingy maro amin’ireo tompon’andraikitra no mihainohaino fotsiny, hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo. Ny sasany amin’izy ireny dia lasa vato misakana ny fampandrosoana entin’ny ...Tohiny
Fitsipi-pitondran-tenan’ireo kandidà : Tsara fa mandringa